Karate – Fifaninanam-pirenena: vita ny fanadinana, hanomboka ny fifaninanana | NewsMada
Karate – Fifaninanam-pirenena: vita ny fanadinana, hanomboka ny fifaninanana
Araka ny fandaharam-potoan’ny federasiona malagasy ny taranja karate, amin’ny fiadiana ny tompondaka nasionaly, nifarana, omaly, ny fanadinana ho an’ny famindrana grady. Hanomboka anio kosa ny fifaninanana.
Nofaranana tamin’ny fanadinana ny fampiofanana sy famindrana grady ireo mpanazatra sy mpitsara ary mpikatroka ny taranja karate, omaly. Nifanindran-dalana tamin’izany ihany koa ny fivoariambe sy ny fanatontosana ny fifidianana hitantana ny federasiona indray amin’ity taom-pilalaovana 2019 ity. Mbola hanao tatitra mahakasika ireo rehetra ny eo anivon’ny mpikambana teknika amin’ny fotoana mahamety azy, raha ny fanazavana voaray. Etsy ankilany, hanomboka anio ny lalao amin’ny fifaninanam-pirenena 2018. Mpikatroka tsy latsaky ny 150 ny hiatrika ny ady, manomboka anio, ary efa tonga eto an-toerana avokoa ireo tompondakan’ny ligy tsirairay izay nahazo alalana avy amin’ny federasiona malagasy ny karate-Do (FMK). Hanomboka amin’ny 8 ora maraina ny fifaninanana hiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, taranja karate. Ny fifantenanana eo amin’ny sokajy “cadets”, “juniors” ary “seniors” samirery (kumite/kata) sy isam-bondrona (kata) no hisantarana ny ady, mitohy amin’ny ekipa “kumite” kosa ny hariva. Hiatrika ny lalao manasa-dalana sy ny famaranana kosa ireo mpikatroka tafakatra ny alahady 13 janoary.
Hohatsairana ny kalitaon’ny fifaninanana amin’ity fiadiana ny tompondaka nasionaly 2018 ity, raha ny fanazavana nentin’ny tale teknika nasionaly, Randrianjoary Roger. Etsy ankilany, “efa nanomana mafy avokoa ireo mpikatroka tao anatin’izay fotoana ela izay”, hoy hatrany ny fanazavany. Eo amin’ny lafiny fitsarana kosa, ho hentitra ireo mpitsara, ireto farany izay vao nahazo fampiofanana fa hampihatra izany sahady amin’ity fifaninanam-pirenena ity. Anisan’ny hahasarotiny ny mpitsara ny fangalaran-taona izay tranga fahita matetika amin’ny fifaninanana goavana toy izao. Nanambara izy ireo fa tsy azo ekena izany ary tsy afaka mandray anjara izay tratra mangala-taona.